2013 – Ck4Ubuntu
Merry Christmas & Happy New Year to you all
Posted on December 24, 2013 by chitkoko	Posted in Uncategorized	— No Comments ↓
The Magic of Christmas never ends and its greatest of gifts are family and friends. Merry Christmas and Happy New Year!
Posted on December 6, 2013 by chitkoko	Posted in Installaltion, Software	— No Comments ↓
http://www.vpnbook.com/freevpn သို့ သွားပါ ။ Bundle များကို download လုပ်ပါ ၊ user name နှင့် password တို့ကို ရေးမှတ်ထားပါ။ VPN bundle zip ဖိုင်ကို ဖြေပါ။ Terminal ကိုဖွင့်ပါ ။ sudo apt-get install openvpn download ပြုလုပ်ထားသော်folder သို့ TERMINAL မှ အောက်ပါ အတိုင်းသွားပါ- ထို့နောက် openvpn –config vpnbook-euro1-tcp443.ovpn ဟုရိုက်၍ …အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။၊ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ….http://www.vpnbook.com/howto/ တွင် အသုံးပြုနည်းတို့ကိုလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်သည်…
Tagged with: openvpn, ubuntu-mm, VPNinubuntu
things to do after Ubuntu 13.10 saucy
Posted on December 3, 2013 by chitkoko	Posted in Community, Installaltion, sh, Software	— 1 Comment ↓
Ubuntu 13.10 OS အား ကျွန်တော်၏ စက်မှာ သွင်းပြီးနောက် စက်စတင် ဖွင့်သည့် အချိန်မှ စတင်၍ login screen၀င်ရောက်ရန် ကြာချိန်မှာ ၅၀ စက္ကန်. ဖြစ်ပါသည်။ထို့နောက်ထပ်မံ၍လိုအပ်သော မရှိမဖြစ်ထည့်သွင်း သင့်သည့်Applications များ၊ source များကို ထပ်မံ ထည့်သွင်းပါသည်။ဦးစွာပထမ မြန်မာ fonts and keyboardအတွက်အလွယ်တစ်ကူအဆင်ပြေစေသော myanmar fonts installation ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် zawgyixkb.zip ကို download ပြု လုပ်ပါ – http://ubuntuone.com/7j1avWwAg26nI7apAg2gNp ပြီးနောက် zawgyixkb.zip ကို right click နှိပ်၍ Open with…
Tagged with: Software, thingstodo, Ubuntu13.10
Facebook Messenger ကို Ubuntu မှာ ဘယ်လိုသုံးမလဲ ။
Posted on November 22, 2013 by chitkoko	Posted in Installaltion, Software	— No Comments ↓
facebook messenger သည် browser မှနေ၍ facebook ကို အသုံးမပြုဘဲ application တစ်ခုအနေဖြင့် သင်၏ desktop မှ တဆင့် facebook account သို့ ၀င်၍ send/receive voice messages ( အသံဖြင့် message ပို့ခြင်း ၊ လက်ခံစကားပြောနိုင်ခြင်း) text messages ( စာသားဖြင့် message ပို့ခြင်း ၊ လက်ခံစကားပြောနိုင်ခြင်း) video calling (သင်၏ webcam မှ…
Tagged with: 13.10, fbmessenger, howto, Software, ubuntu-mm
our community our team
Posted on November 20, 2013 by chitkoko	Posted in Community	—7Comments ↓
Hello, Ubuntu Myanmar LoCo Team….. This morning was very pleasant day for all of your work done. Our team was reapproved this morning 2:00AM Myanmar Time for next couple of year. See our Ubuntu loco team portal . Verified…
Tagged with: community, loco, Office for Ubuntu, translation, Ubuntu Myanmar Lo Co Team, ubuntu-mm, Ubuntu-MM events
Linux Kernel 3.12 install in Ubuntu 13.10
Posted on November 17, 2013 by chitkoko	Posted in Uncategorized	— No Comments ↓
Linux Kernel 3.12သည် bug fixes ပြုပြင်၍ ပိုမို ကောင်းမွန်စေသော kernel အသစ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Kernel 3.12 တွင်အသစ်ထပ်မံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များကိုအောက်ပါအတိုင်းလေ့လာနိုင်သည်- – Improved Dynamic Power Management support for newer Radeon GPUs and other changes after the Radeon DPM feature was merged in Linux 3.11 – A…
Posted on November 15, 2013 by chitkoko	Posted in Installaltion, Software, Ubuntu mobile	— No Comments ↓
Ubuntu One application သည် Ubuntu Operating System ၏ Cloud ဝန်ဆောင် မှု တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် register လုပ်ထားပါက5Gb free cloud storage ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ https://login.ubuntu.com/d5TTBpVQDlC570CQ/+new_account သို့သွားပါ။ Account တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ။ ထို့နောက်သင် cloud ပေါ်သို့ sync လုပ်လိုသော file များကို Ubuntu One Folder တွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ ထားရုံဖြင့် သင်သည် သင် ၏ file များကို device…
Tagged with: Software, Ubuntu, Ubuntu One Music, ubuntu-mm, UbuntuOne
How to Install Viber in Ubuntu 13.10 64bits?
Posted on November 11, 2013 by chitkoko	Posted in Installaltion, Software	— No Comments ↓
Viber နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကျယ်တ၀င့် မရှင်းပြတော့ ပါ ၊viber ကို Android, iOS, Windows Phone, Blackberry တို့တွင် VOIP (Voice over internet protocol) ဖြစ်ပြီး ယခု ထွက်လာသော version မှာ BETA Version ဖြစ်ပါသည် Viber for Linux features: HD quality voice calls; video calls (desktop to desktop only); text, photo and sticker…
Tagged with: Viber, Viber64bits, ViberforUbuntu
Posted on November 10, 2013 by chitkoko	Posted in Installaltion, Software	— 1 Comment ↓
java ကို Ubuntu မှာထည့်သွင်းရန်အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ- အောက်ပါ command ကို terminal တွင် ရိုက်ပါ – sudo apt-get purge openjdk* java7 ကို အခြားသော PPA များ မှ ထည့်သွင်းခဲ့ လျှင် အောက်ပါအတိုင်း command ကို terminal တွင် ရိုက်ပါ sudo apt-get purge oracle-java7-installer* sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*java*…
Tagged with: java, javaInUbuntu
becareful !!7dangerous Command in Linux
Posted on November 9, 2013 by chitkoko	Posted in Uncategorized	— No Comments ↓
becareful !!7dangerous Command in Linux Command line ကျွန်တော်တို့ Linux OS တွင် powerful အဖြစ်ဆုံးက တော့ Command Line CLI ဖြစ်ပါသည် ။ Command Line CLI ကနေ သင်သည် program /software များကိုထည့်သွင်းခြင်း ၊ ပြန်ထုတ်ခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သလို သင် ၏ စက်အတွင်းရှိ file များကို manage လုပ်နိုင်ပါသည်။ သင်အသုံးမပြုလိုသော ဖိုင်များကို ဖျက်ခြင်း ၊…
© 2019 Ck4Ubuntu